April 2019 – Page 2 – Puntlandtimes
April 20, 2019 W LAASCAANO
MUQDISHO(P-TIMES)- Guddoonka baarlamaanka Soomaaliya ayaa loo gudbiyey Mooshin ka dhan ah Wasiiradda faraha badan ee qeybta ka ah Xukuumadda Federaalka. Xildhibaanada mooshinka gudbiyey ayaa sheegay […]
Sudan : Lacago Balaayiin Ah Oo Laga Soo Saaray Guriga Madaxweynihii Hore Sudan Ee Albashiir
Gudiga la dagaalanka musuqmaasuqa ee uu dhisay golaha milateri ee haatan sida ku meel gaarka u maamulaya Sudan ayaa shaaca ka qaaday in lacag fara […]
Madaxda gobolada Puntland , Juballand iyo Galmudug ayaa ku sugan magaalada Nairobi oo ay kulamo kula yeelanayaan ergo ka socoto beesha caalamka . Arimaha ugu […]
DAAWO: Goodax Barre “Puntland ugama maarano Waxbarashada Soomaaliya in ay naga caawiso”
MUQDISHO(P-TIMES)- Wasiirka Waxbarashada ee Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo ay maanta u yeereen guddiga Aqalka Sare ee arrimaha bulshada ayaa wax laga weydiiyey hadal uu […]
XOG: Qaar kamid ah dadka loo hayo Dilkii foosha xumaa ee loo geystay Caasho Ilyaas oo la keenay Garoowe & PTIMES oo xog heshay.
GAROOWE(P-TIMES)- Ciidamada Amniga ee Puntland ayaa xalay keenay magaalada Garoowe ee caasumada maamulkaas shan kamid ah eedaysanayaasha loo haysto in ay ka dambeeyeen dilkii iyo […]
FAAHFAAHIN: Madaxweynaha Puntland oo gaaray dalka Kenya, Maxayse daaran tahay booqashadiisa Nairobi?
NAIROBI(P-TIMES)- Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo 10-kii maalmood ee lasoo dhaafay kusugnaa dalka Imaaraatka Carabta ayaa gaaray dalka Kenya, waana booqashadiisii labaad ee uu […]
AKHRISO: M/weyne Farmaajo oo looga digay arrin halis ah, haddii uu ku dhaqaaqo…
MUQDISHO(P-TIMES)- Madaxweynaha dawladda Faderaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa looga digay in uu isku dayo qorshe uu xukunka ku dheeraysanayo, marka lagaaro mudada xil-heyntiisa oo […]
AKHRISO: Dawladda PL oo ka hadashay Geeridii mid kamid ah Siyaasiintii ugu caansanaa mandiqadaas.
GAROOWE(P-TIMES)- War qoraal ah oo ka soo baxay Madaxtooyada Puntland goor dhaw ayaa looga hadlay geeridii Siyaasi caan ahaa oo katirsanaa mudo dheer maamulkaas, kaas […]
XOG: Sacuudi Careebiya oo hiil-weyn uga baahatay maanta Soomaaliya & Jabuuti, Maxayse kufalaysaa?
MUQDISHO(P-TIMES)- Dawladda Sacuudi Careebiya ayaa shalay u dirtay dalalka Soomaaliya & Jabuuti, Wasiiru dowlaheeda Arrimaha dibada ee qaabilsan Afrika, wuxuuna casumaad gaarsiiyey madaxda labada dal, […]
WAR DEG DEG AH: Siyaasi caan ka ahaa Puntland oo goor dhaw geeriyooday, Waa kuma?
GAROOWE(P-TIMES) – Wararka hadda naga soo gaaraya magaalada Garoowe ee caasumada Puntland ayaa sheegaya in uu goor dhaw geeriyooday Wasiirkii hore ee wasaaraddaha Howlaha guud, […]
Kulan muhiim ah oo maanta ka furmaya Garoowe, laguna soo bandhigayo Siyaasaddaha Xukuumadda cusub.
GAROOWE(P-TIMES) – Dawladda Puntland ayaa maanta qabanaysa kulan muhiim oo lagu soo bandhigayo siyaasadaha lagu hagayo 42 Hay’adood oo katirsan dawladda, kuwaas oo ka madax […]
UPDATE: Wararkii ugu dambeeyey kulamada ka socda Nayroobi, maxaan ka ognahay oo ay sababtoodu tahay?
NAIROBI(P-TIMES)- Hoggaamiyaasha dawlad gobaleedyada Soomaaliya ayaa qaarkood ay kusugan yihiin magaalada Nairobi ee dalka Kenya, waxaana ay kala gaareen xiliyo kala duwan, Madaxweynaha Puntland Siciid […]
Axmed Wali Alqaasim oo ah nin u dhashay Yemen kuna safra kaliya Awar ayaa gaaray bariga Somaliland xilli ninkaan uu sheegay in illaa 50 dal […]
XOG: M/weyne Farmaajo oo gudaha garoonka Diyaaradaha Muqdish ku qaabilay Wafdi ka socday Sacuudi Careebiya.
MUQDISHO(P-TIMES) – Madaxweynaha Dawladda Faderaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta oo Jimce ah April 19, 2019, wuxuu madaarka magaalada Muqdisho ee diyaaradaha ku qaabilay […]
WARBIXIN: Maxaad ka og tahay inta jeer uu baaqday Shir uu dawlad gobaleedyada ugu yeeray M/weyne Farmaajo, Maxaase sababa?
MUQDISHO(P-TIMES)- Labo sanno iyo dheeraad oo uu Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hayo xilka Madaxweyne-nimada Soomaaliya, waxaa baaqday kulamo uu iskugu yeeray Madaxda dawladdaha xubnaha ka […]
DHAGEYSO: Maxaa keenay baaqashada kulankii ay iskugu imaan lahaayeen Madaxda D/Gobaleedyada & DF Soomaaliya?
MUQDISHO(P-TIMES)- Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa horey u iclaamiyey qabashada kulanka Amniga Qaranka oo ka dhici lahaa magaalada Muqdisho 19-ka bishan, oo ku beegan […]
DUBIA(P-TIMES)- Warbaahinta Soomaalida ayaa baahisay macluumaad la xariira in ay ku kulmeen magaalada Dubia ee dalka Iskutaga Imaaraatka Carabta Madaxweynayaasha maamulada Puntland & Somaliland ee […]
Puntland Oo Amartay Xarumaha Quraanka Iyo Diinta Ee Puntland In Ay Is Diiwaan Giliyaan , Muddo Ayaa Loo Qabtay
April 18, 2019 W LAASCAANO
Wasaaradda cadaaladda iyo arimaha diinta Puntland ee ayaa ku amaratay macalimiinta xarumaha lagu barto quraanka kariimka ee deegaanada Puntland in ay iska soo diiwaan giliyaan […]
DAAWO: Maxaa ka soo baxay kulankii golaha Xukuumadda Puntland ee ku qabsoomay Garoowe?
GAROOWE(P-TIMES) – Madaxweyne kuxigeenka Puntland ahna Kusimaha Madaxweynaha Axmed Cilmi Cismaan ayaa shir gudoomiyey kulanka golaha Wasiiradda Puntland, kaas oo looga hadlay arrimaha Ammaanka, Siyaasadda, […]
Dowlada Somaliya Iyo UPU Oo Isla Meel Dhigay Howl Galinta Adeeggii Boostada Dalka
Waxaa soo gabagaboobay kulankii wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta Sonmaliya kaasi oo sedex cesho ka socday magaalada Muqdisho . Kulankaas oo looga hadlay soo nooleynta adeeggii […]
AKHRISO: Puntland oo jawaab ka bixisay Hadalkii Goodax Barre, kuna dhawaaqday…
Cabdullaahi Dool : “Ma jirto sabab Soomaaliya ay xiriir ula yeelan weyso Israa’iil”
DAAWO: RW Soomaaliya oo tababar u soo xiray ciidamo katirsan Xooga dalka, kana hadlay arrimo xasaasi ah.
XOG: Puntland oo maanta go’aan ka soo saaray xariirka ay la leedahay DFS, xili shalay ay diiday….
AKHRISO: Yuusuf Garaad & Thaabit Maxamed oo baaq ka soo saaray xaaladda Muqdisho, Fariin-na u diray Madaxda DF Soomaaliya.
XOG RASMI AH: Madaxda dawlad gobaleedyada Soomaaliya oo maanta la kulmaya Beesha Caalamka, una gudbinaya Cabasho ka dhan ah DF.
AKHRISO: Wararkii ugu dambeeyey Banaanbaxyo laga cabsi qabo oo ka dhaca Muqdisho iyo Ciidamada dawladda Heegan ku jira.
C/raxmaan C/shakuur: “Waa xaq dastuuri ah in shacabku dibed-bax Nabadeed qabsadaan”
Wareysi Cali Maxamed Geedi ” Qaraxyada Muqdisho Ka Dhaca Waa Kuwo Siyaasadeysan , Hal Arin Ayaana Marqaati Ka Ah”.
Daawo : Culimada Somaliya Oo Ka Digay Banaanbaxa Qamiista Ee Muqdisho , 6 Qodob Aya U Cuskadeen.
XOG: 100 maalmood ka dib Doorashadii M/weyne Deni maxaa u qabsoomay?
Madaxweynaha Somaliland oo maanta safarkii 3aad ugu socdaalaya dalka Imaaraatka Carabta.